PHP Web Developer တစ်ယောက်သိသင့်သော ယျေဘူယျ ခေါင်းစဉ်များ - ၁
Html ကတော့ Hyper Text Markup Language ဖြစ်ပြီး Web Page များရေးသားဖန်တီးဖို့ အတွက်ဖြစ်ပါသည်။ Html file တစ်ခုတည်ဆော်ကတော့မည်ဆိုလျှင် Extension သည် .html သိမ်းဆည်းပြီး Web Browsers ( eg. chrome, firefox, Microsoft Internet Explorer, etc. ) များ Run ကြည့်နိုင်ပါသည်။ Hypertext ဆိုတာကတော့ Web Pages တွေဟာ တစ်ခုနဲ့ တစ်ခု Link ချိတ်ဆက်ပြီး သုံးလို့ရအောင် ဖန်တီးထားတဲ့ Page များဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီ Web Pages များကိုစုစည်းပြီး မိမိ ဖန်တီးလိုသော WebSite / Web Application များကို ဖန်တီးနိုင်ပါသည်။
CSS ဆိုတာကတော့ ကျွန်တော်တို့ ရေးသားခဲ့တဲ့ Web Pages တွေကို Styles တွေ အပြောင်းအလဲ ပြုလုပ်တဲ့နေရာမှာ အသုံးပြုပါတယ်။ မိမိရေးသားထားခဲ့သော HTML Web Pages တွေကို ပိုပီး လှပ သပ်ရပ်လာအောင် ပြုလုပ်တဲ့နေရာမှာ အသုံးပြုပါတယ်။
Client Side ဆိုတာဘာလဲလို့ ရှင်းပြဖို့လိုသွားပါြ့ပီ၊ Client Side ဆိုတာက ကျွန်တော်သုံးနေတဲ့ Web Application, Website တွေ ကို Browser ပေါ်မှာ Run တဲ့အခါမှာ အဲ့ဒီ Browser ပေါ်မှာဘဲ အပြောင်းအလဲတွေ Validation စစ်တာမျိူးးတွေကို Client Side ဖြစ်တဲ့ Browser ( eg. chrome, firefox, Microsoft Internet Explorer, etc. ) ပေါ်မှာဘဲ စစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီလိုမျိူးဖြစ်စဉ်တွေကို Client Side ကိုခေါ်ပါတယ်။
ယျေဘူယျ အဖြစ်အပျက်များသာ ဖြစ်ပါသည်။
ယျေဘူယျ အကြောင်းအရာများသာ ဖြစ်ပါသည်။